Muri pano: musha / Technology News / famba / Chii chitsva muPixel 6 Pro kamera?
Iyo Google Pixel yagara iine mukurumbira wemifananidzo yakanaka. Kubva pakatanga mudziyo wekutanga muna 2016, chero zvaunofunga nezvemafoni eGoogle - kana kuti Android - iyo Pixel yanga iri chirevo chekamera huru.
Kune vamwe zvave kuvhiringa: Google yakaramba iine ma sensors akafanana uye yakawanda yakafanana pamafoni ayo kwemakore akati wandei. Nepo vamwe vakasvetuka-svetuka nemaitiro akasiyana, iyo Pixel kamera ichangobva kutenderera.
Asi zvese zvachinja muna 2022, nekuchinja kukuru muPixel kamera mumakore matanhatu enhoroondo yayo.
Iyo Google Pixel 6 Pro kamera
Kune makamera matatu kumashure kweiyo Google Pixel 6 Pro, mune iyo yakasarudzika-yakagadzirwa Kamera Bar inotambanudzira kuseri kwefoni.
Iyo bar zvakare inogara iyo laser yekubatsirwa kutarisa, pamwe neyekuona uye flicker sensors, pamwe nemwenje.
Kushanda kuruboshwe kuenda kurudyi une kamera hombe, ultrawide kamera uyezve yakasarudzika rectangular kuvhura kune yakapetwa/periscope telephoto.
Nhau huru ndeyekuti Google yatamira kune 50-megapixel sensor, kubva pa12-megapixel sensor iyo yaakashandisa kwenguva yakareba. Izvi zvinounza shanduko yatisati tamboona.
Iwo ekare maPixel modhi anoshandisa iyo Sony IMX363 sensor, ine 1/2.55in saizi uye 12.2-megapixel resolution. Iwo mapixels pane iyi sensor ndeye 1.4μm.
Iyo sensor nyowani inofungidzirwa kuti ndiyo Samsung ISOCELL GN1 (izvi hazvina kusimbiswa), asi Google yakasimbisa kuti ine 1/1.31in saizi, iyo yakakura kwazvo, uye 50-megapixel resolution. Mapixels anoguma ari 1.2μm.
Zvose izvi zvinorevei? Kuregeredza kugadziriswa kweminiti, zvinoreva kuti iyo Pixel 6 Pro sensor (uye Pixel 6 yeiyo nyaya) yakakura kupfuura kare. Google inoti inogona kutora 150 muzana imwe chiedza - uye chiedza ndicho chinhu chakakosha pakutora mifananidzo.
Iwo mapixels ari pa sensor nyowani ari madiki, asi zvinoshamisa, kwete nezvakawanda. Pa1.2μm iwo akakura kupfuura akawanda anokwikwidza, asi akabatanidzwa kuti ape mufananidzo we 12.5-megapixel (50 ÷ 4 = 12.5).
(Zvakakosha kuyeuka kuti ma sensors akawanda e high resolution haana kukura pane yekare Pixel sensor, uye ane mapixel madiki. Izvi zvinganzwika zvakanaka pabepa, asi hazvizoiti nguva dzose zvinopa zvibereko zvakanaka kana chiedza chakawanda chichidiwa.)
Iyo Pixel 6 Pro ine yakatsaurirwa telephoto kamera, asi ichienda iyo Pixel 6, iyo 50-megapixel main kamera ichafanirwa kupa resolution yeiyo 7x Super Res Zoom iyo yainopawo.
Kusiyana nemamwe mafoni, hapana sarudzo yekupfura mune yakazara resolution, kureva, 50 megapixel mafoto. Isu tinofara nazvo - hapana chakanakira kupfura mifananidzo yakakurisa kunze kwekunge chirongwa chako chiri chekukwevera nekudyara nemaoko mushure - uye poindi yese yeSuper Res Zoom ndeyekuti hauite izvozvo.
Pane zvemagetsi uye optical mufananidzo kugadzikana pane huru kamera.
12MP, 1.25μm, f/2.2, 114 madhigirii
Iyo Ultrawide kamera yakafanana neyatakamboona, ikozvino inopa izvo zvinonzi 0.7x zoom asi inosvika 114 madhigirii yakafara.
Kare yaive 0.6x uye 117 madhigirii, asi cherechedza kuti aya epamusoro ndima yemaonero haawanzo kuwanikwa kunze kwekunge washandisa iyo RAW mufananidzo faira.
Imhaka yekuti pane kugadziridzwa kwema lens pakutamba kunobvisa kumwe kukanganisa pamufananidzo uye izvo zvinowanzoreva kuti mufananidzo wekupedzisira hauna kupamhama seyakataurwa nhamba.
Sezvineiwo pano kugadzirisa kwadzikira (ndiyo 16-megapixels paPixel 5 uye ekare modhi), asi saizi yepixel yakawedzera, saka inofanira kunge iri nani pakubata mwenje. Iyo aperture inoramba yakafanana.
48MP, 0.8μm, f/3.5, 4x maziso
Hutsva huri paPixel 6 Pro hunobva kune telephoto lens - yekutanga periscope kana yakapetwa mhando lens yakashandiswa neGoogle, iyo inonyatsoona ichijoinha mainstream neiyi tekinoroji, iyo Samsung neHuawei vanga vachisundidzira mumidziyo ichangoburwa.
Panzvimbo pekuva negwara rakatwasuka remwenje kubva kune lenzi kuenda ku sensor, mwenje unoshandurwa kuburikidza ne90 madhigirii neprism. Izvo zvinopa imwe nzvimbo pakati pe lens uye sensor mufoni kuitira kuti kukura kukuru kugone kuwanikwa - saka iyo isinganzwisisike rectangular dhizaini.
Iyi haisi nhare yekutanga ine telephoto kubva kuGoogle - iyo Pixel 4 XL inopa 2x - asi iyo Pixel 6 Pro inhanho yekumberi mukuvavarira uye ichapa mifananidzo yakajeka ine zoom yakakura.
Kune 48-megapixel sensor yekutanga uye nepo mapikseli asiri makuru, resolution iyoyo iripo kubatsira kufambira mberi kuenda ku20x Super Res Zoom. Inopa OIS neEIS kuti irambe yakatsiga. Super Res Zoom ndeye hybrid zoom system inotora data kubva kune akawanda mafuremu kuti ivandudze kukwirisa, inonyanya kushandisa kuremerwa kweAI kuita mifananidzo yakasimudzwa zviri nani.
Zvinoreva kuti iwe unowana mibairo iri nani uchishandisa pinch zoom pane kana iwe ukatora foto wobva watsikirira kukudza mufananidzo - uye izvo zvine chokwadi cheiyo 20x Super Res Zoom system yePixel 6 Pro.
Nepo iyo aperture yadonha kusvika f/3.5, zvichireva kuti mwenje mushoma unosvika kune sensor, izvi hazvishamisi pamalenzi efoni. Google inotamba hunyengeri humwe hunoshandiswa nevamwe - seSamsung - yekusarudza lenzi zvichienderana nemamiriro emwenje. Rova iyo 4x zoom sarudzo mune yakaderera mwenje uye uri kunyatso shandisa dhijitari zoom kubva kune huru sensor, nekuti mhedzisiro ichave iri nani pane kubva ku telephoto mumamiriro iwayo.
Izvi zviri nyore kuyedza - ingovhara lenzi kuseri kwefoni kuti uone yairi kunyatso kushandisa. Kana, muchiedza chakaderera, iwe uchida ma zooms epamusoro, inozochinja kune telephoto. Mune imwe nguva paPixel 6 Pro, iwe unogona kuona switch muapp kana iwe uchibva kudhijitari kuenda kuOptical - zvakare, unogona kuyedza nekuisa chigunwe chako pamusoro inoenderana lens kuti uone zvauri kunyatsotarisa.
11.1MP, 1.22μm, f/2.2, 94 madhigirii
Iyo yekumberi kamera paPixel 6 Pro inokwira kusvika 11.1 megapixels uye inotsigira 4K vhidhiyo. Iyo Pixel 6 ine 8-megapixel yekumberi kamera uye inongopa Full HD vhidhiyo kutorwa.
Iyo Pixel 6 Pro yekumberi kamera ine zvakare ultrawide uye semamwe maPixel modhi inopa kune akasiyana minda yekuona, saka iwe unogona kuve nechimwe chinhu chiri padyo kana chimwe chinhu chakafara - chakanakira mapfuti eboka. Zvekare, iyo yakafara angle nhamba ye94 madhigirii inongowanikwa muRAW, inozogadziriswa lenzi uye inopedzisira yaita nhete.
Iyo kamera yekumberi inotariswa, asi inopa mamodhi ese aunowana kumwe kunhu mufoni - mufananidzo, Night Sight, Motion mode, nezvimwe. , saka zvakanyanyisa kuita kupfuura vamwe vakwikwidzi.
Saka chii chachinja muapp?
Isu takatsanangura zvinopihwa nemakamera ese, asi kana iwe ukavhura iyo app paPixel 6 Pro, hapana zvakawanda zvachinja. Kuenzaniswa ne Pixel 4a 5G (vese vachimhanya Android 12), hapana misiyano yakawanda muapp yacho pachayo.
Izvi, tinoti, chinhu chakanaka. Hapana chitsva chekudzidza pano, ichiri chiitiko chakareruka, chine clutter-yemahara interface uye kudzivirirwa kwese kwesarudzo izvo zvinongovhiringa vashandisi.
Chokwadi, iyo menyu yezvigadziriso yakangofanana, kubata iyo icon yezvigadziriso ichaburitsa menyu ine zvigadziriso zvinoenderana nemodhi yauri (semuenzaniso, kugadzirisa muvhidhiyo, kana iwe uchida kudzoreredza kumeso mumufananidzo, nezvimwewo).
Izvo zvachinja ndeyekuwedzerwa kweMotion modhi.
Motion mode yakatsanangurwa
Chimwe chezvinyorwa zvitsva zvemusoro zvinotsamira paAI - sekuwanda kwechiitiko cheGoogle kamera - iMotion mode. Izvi zvakakamurwa kuita maviri sarudzo - chiito pani uye kuratidzwa kwenguva refu.
Action pan ndiyo mhando yechinhu chaungashandisa kubata chinhu chichifamba nekumhanya, semudhudhudhu uri kupfuura. Nechinyakare kuti utore mapfuti aya, waifambisa kamera nebhasikoro uchitora foto, zvobva zvadzimaidza kumashure uku uchichengeta nyaya yakapinza uye yakatarisa.
Action pan inodzokorora izvi nekutarisa pamufananidzo uye nekuona kuti chii chinofanira kupinza uye chii chinofanira kunge chiri kufamba.
Imwe sarudzo ndeyekuratidzwa kwenguva refu. Urwu ndirwo rudzi rwechinhu chaungashandisa kugadzira kusajeka mune imwe mufananidzo uchiripo - nzira dzakareruka kana kufamba kwemvura yemapopoma semuenzaniso. Kana ukashandisa "chaiyo" kamera ungangofanira kushandisa neutral density (ND) sefa kudzikisa mwenje unouya kuitira kuti iwe ugone kuve nekuratidzwa kwenguva refu kuti utore mafambiro pasina kupfuudza zvimwe zvese. Iyo Google Pixel 6 ichaita izvo ichishandisa AI, ichinyatso kuenzanisa mufananidzo kuti upe fungidziro yekufamba muchiitiko.
Sarudzo mbiri idzi dziri nyore kushandisa, iwe unongofanirwa kusarudza zvaunoda uye rova ​​bhatani.
Muchena muyero inotsvedza
Ikozvino kune sarudzo yekugadzirisa chena chiyero nemaoko, kuwedzera kune yekufumura masiraidhi ekupenya uye mimvuri yaivepo kare.
Iyi ingangove idiki yesarudzo ye geeky, asi inogona kukonzerwa nenyaya yekuti imwe nzvimbo iyo Pixel kamera yanga isiri iyo yakasimba, yaive mune zvimwe zvemukati zviratidziro. Kunyange nguva zhinji zvakanaka, takatora mifananidzo yakawanda yemukati inodziya - kunyanya pasi pechiedza chekugadzira - kubva kumafoni ePixel.
Zvino iwe unokwanisa kuzvigadzirisa iwe pachako nekutsvedza chigadziriso, zvichireva kuti unogona kubvisira zvikanganiso zveyero mukati memba. Kubvuma kukundwa, zvichida?
Kana iwe usingade chero yeaya manyorerwo ekudzora anogona kudzimwa muzvirongwa.
Imwe yekuwedzera iToni Yechokwadi. Iyi haisi modhi kana chimwe chinhu chaunogona kudzora, chakavakirwa muAI kuseri kwePixel kamera.
Yakagadzirwa kuti ione mavara eganda akasiyana, saka kamera inogona kuve nechokwadi chekuti munhu wese ari pamufananidzo anotaridzika sezvaanofanira.
Kudzokorora kwemamodhi aripo
Iyo Google kamera inopa Usiku Usiku izvo zvinogona kutora kuratidzwa kwenguva yakareba zvakabatwa nemaoko mumamiriro echiedza chakaderera nemhedzisiro inoshamisa. Inoshandisa huwandu hwakazara hwetekinoroji - kubhuroka iyo ISO, kurebesa kubatwa, kubatanidza akawanda mapikicha uye kugadzirisa kubvisa blur uye ruzha - kugadzira mifananidzo yayo.
Astrophotography mode ndeyekuwedzerwa kweNight Sight kana kamera yakagadzikana uye yakanongedza denga rakasviba. Inobva yatora mifananidzo kusvika kumaminitsi mana kuitira kuti ugone kupfura nyeredzi.
Husiku Sight inogona kusarudzwa pamurume kana otomatiki kubatanidzwa kana mune yakasviba mamiriro.
Portrait ndeyemhando yepamusoro, inopatsanura chinyorwa chemberi kubva kumashure kugadzira iyo bokeh maitiro.
Pane mbiri sarudzo dzinopihwa paPixel 6 Pro 1x kana 2x saka iwe une kureba kwakasiyana kwakasiyana, kunyangwe zvese zvichibva kune imwechete kamera. Unogona kuishandisa pane chero chinhu chaunogona kutarisa pachiri, asi kana chiso chikaonekwa, kamera ine pfungwa iri nani yeiyi nyaya.
Iwe unozove nesarudzo yekugadzirisa mufananidzo mune Zvishandiso sarudzo muGoogle Photos. Izvi zvinokutendera kuti ugadzirise blur kana kudzika, uye kana chiso chikaonekwa, kugadzirisawo chimiro chechiedza.
Vhidhiyo inopa kunonoka kufamba uye kupera nguva pamusoro pevhidhiyo yenguva dzose. Izvo zvakajairika vhidhiyo marongero paPixel 6 Pro anosanganisira 30 kana 60fps, paFull HD kana 4K resolution.
Nguva inopera uye kufamba zvishoma nezvishoma zvese zvinopa kumhanya kwakasiyana.
Mukati mevhidhiyo mune zvakare kudzikamisa sarudzo, iyo inosanganisira akati wandei epamusoro sarudzo. Pane Yakakiyiwa kuti vhidhiyo irambe yakagadzikana, Inoshanda kune kana paine kufamba kwakawanda, kana paine Cinematic Pan, iyo inononotsa zvinhu pasi kune yakatsetseka pani inotaridzika inyanzvi, pane kuzunguza kutenderera kwekamera.
Pakupedzisira kune mamwe emhando dzekare dzeGoogle dzakagara mune iyi yekupedzisira sarudzo, kusanganisira panorama uye Photo Sphere, iyo inogona kusona pamwe mafoto zvine hungwaru hunoshamisa. Kune zvakare kuwana Google Lens, asi iyo sarudzo yakabatanidzwa mukati mekamera, saka kana iwe ukainongedzera kuQR kodhi, ichapa chinongedzo; kana ukainongedzera panhevedzano yenhamba, inozopa idzo.
Kuwedzeredzwa kuGoogle Mifananidzo
Zvimwe zvezvinhu zvitsva zvekamera hazvisi kana mukhamera, ivo vari mukati Google Photos.
Pane pfungwa chaiyo yekuti Google iri kuvaka ecosystem yayo yakatenderedza Google Photos, ichipa akasiyana maficha kune varidzi vePixel uye Google One vanyoresa. Pamwe ndiko kudzikamisa avo vachiri kuchema kurasikirwa kweiyo isina muganho yekuchengetedza mafoto.
Mifananidzo yeGoogle ikozvino inopa mashoma maturusi.
Mashiripiti Eraser, sekureva kunoita zita, nzira yekukurumidza yekubvisa zvinhu kubva pamufananidzo waungasada. Iwe unogona kutora foto uye ipapo muZvishandiso muGoogle Mapikicha unogona kurivhura uye kurongedza mufananidzo.
Mapikicha eGoogle anotarisisa mufananidzo kuti aone kana achikwanisa kuona chero chingabvisa, asi ipapo unogona kungoteedzera chigunwe chako pamusoro pezvinhu zvaunoda kubvisa. Chigadziko chemarara mumugwagwa kumashure kwako semuenzaniso, kana chikwangwani. Iwe unogona kunyange kupinza zoom kuita kuti izvo zvinobviswa zvive chaizvo.
Iwe zvakare haufanirwe kutora mafoto nePixel 6 Pro kuti ushandise iyi - ichashanda nemifananidzo yako yese.
Face Unblur yakagadzirirwa kubvisa zviso zviya zvakasviba kana mumwe munhu aramba kunyarara. Paunovhura Google Photos unoona paine bheji pairi kuratidza kuti yabvisa kusajeka.
Pane zvakawanda zvinozivikanwa nezvePixel 6 Pro kamera uye pane zvakawanda zvitsva. Isu tinoda kuti Google yakachengeta iyo interface uye chiitiko chakafanana, asi yakashandura ari pasi petekinoroji.
Zvirokwazvo, pane zvakawanda zvine hungwaru pano, zvichinyatso kuratidza kusanganiswa kwekutora mafoto neachangobva kuvandudzwa hardware. Ipo varidzi vezvimwe zvishandiso zvePixel vachabatsirwa kubva kune mamwe matekinoroji, iyo Pixel 6 Pro ndiyo itsva mireza.
Tichange tichiwedzera chimiro ichi neruzivo rwakawanda uye akawanda masampuli anoenderana nekushambadza yedu yekupedzisira wongororo yePixel 6 Pro. Ramba wakatarisa.